Cloud of Luster Indawo Yomshado - Umagazini Design
Indawo Yomshado I-Cloud of luster yindawo yomshado esehholo lomshado edolobheni laseHimeji, eJapan. Idizayini izama ukuhumusha umoya wesimanje womshado emshadweni ube indawo ebonakalayo. I-chapel yonke imhlophe, ifu elimbozwe cishe ngengilazi egobekile liyivulelela engadini ezungezile nengxenye yamanzi. Amakholomu asetshenziswa enhlokodolobha eyi-hyperbolic njengezikhanda eziwaxhumanisa kahle nophahla oluncane. Umugqa we-chapel ohlangothini lwesisekelo uyisigaxa se-hyperbolic esivumela sonke isakhiwo ukuthi sivele kube sengathi sintanta phezu kwamanzi futhi sandisa ukukhanya kwalo.
Igama lephrojekthi : Cloud of Luster, Igama labaklami : Tetsuya Matsumoto, Igama leklayenti : 117 Group.
Indawo Yomshado Tetsuya Matsumoto Cloud of Luster